Aragtida UFO: Meelaha Ugu Wanaagsan Si Aad U Qabato Shay Duulis Oo Aan La Aqoonsan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Aragtida UFO: Meelaha Ugu Wanaagsan Si Aad U Qabato Shay Duulis Oo Aan La Aqoonsan
Wararka Australia • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Chile • Wararka Shiinaha • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Waxaa laga yaabaa inaan waqti badan ku helno guriga sababtuna tahay COVID-19 waxay na siisay waqti aad u weyn oo aan ku eegi karno baaxadda cirka oo aan aragno… UFOs. Mise waa run ahaantii waxaa jira aragtiyo UFO ka badan kuwii hore?
Sida laga soo xigtay militariga.com, waxaa jiray in ka badan 1,000 arag oo UFO ah 2020 (qiyaastii 7,200 oo iyaga ka mid ah) marka loo eego sanadkii 2019.
Telefoonno leh kaamirooyin la dhisay ma fududeeyeen in la qabto wax aan cirka laga garanayn? Sawirradu ma aha inay ahaadaan garsoorayaal wanaagsan dhammaan sawirradii hore.
Miyaad si ulakac ah u aadi lahayd meel lagu yaqaan arag UFO mise waxaad samayn lahayd caksigeeda oo waad ka fogaan lahayd?
Waxaa jira tiro aad u yar oo la dhacsan Walxaha Duulimaadka Aan La Aqoonsanayn, iyo safar lagu tago meel caan ku ah aragga waa fasax la sameeyo si loo dalbado. Haddii aad ka mid tahay kuwa rajaynaya kulanno dhow oo ah nooca saddexaad, halkaan waxaa ah meelo loo aadi karo liiska ugaadhsiga UFO.
Aagga 51, Nevada
Laga soo bilaabo fikradaha shirqoolka cusub ilaa dhacdooyinka Facebook oo dadka ku boorrinaya inay saldhigga galaan, Aagga 51 ayaa had iyo jeer ku jira wararka. Rakibaadda milatariga Mareykanka, oo ku dhawaad ​​160 km waqooyi ka xigta Las Vegas, ayaa ah meel ay ka siman yihiin dadka fikradaha shirqoolka ah. Aragtiyaha iyo xitaa buugaagta cilmi -baarayaasha iyo dadka u dhuun daloola dawladda ayaa sheegaya in aaggu uu yahay meel lagu kaydiyo dayaaradaha shisheeye ee shilka galay oo ay ku jiraan dadkii saarnaa, kuwa nool iyo kuwa dhintayba, iyo agabkii laga soo saaray Roswell. Qaarkood xitaa waxay rumeysan yihiin in aagga loo isticmaalo in lagu soo saaro diyaarado ku saleysan tikniyoolajiyadda shisheeyaha ee la soo kabsaday. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta UFO waxay ku andacoonayaan xarun qarsoodi ah oo dhowaan laga helay dhulka hoostiisa ee buuraha Papoose ee Nevada waa meesha ay ku qarsoon yihiin noolaha ka baxsan oo aan ku sugnayn aagga 51. Haddii ay dhab ahaantii leedahay shisheeye iyo haddii kaleba waa laga doodi karaa, laakiin aagga hubaal waa heer sare lagu kala saaro. Soo -booqdeyaashu waxay ku kaxayn karaan waddada weyn ee gobolka oo leh sumadda “Waddada Dheeraadka ah.” Waxaa ka buuxsamay meherado shisheeye oo ku teedsan wadada saxaraha. Xusuusnow inaad kor u eegto haddii aad halkaan joogto habeenkii Waxay noqon kartaa maalintaada nasiibka leh, ama habeenka um.
Markabka hooyada ee dhammaan meelaha UFO, meeshani waxay caan ku tahay Dhacdadii Roswell ee dhacday bishii Luulyo 1947. Sida muuqata, milatariga Maraykanku wuxuu ku dhawaaqay inay ka soo ceshadeen meel bannaan oo cidla ah oo u dhow (markii dambe, waxay yiraahdeen waa uun buufin cimilada ). Tan iyo markaas, dadka fikradaha shirqoolka ahi waxay sheegteen hadhaagii digsi duulaya, iyo xitaa shisheeyaha dhintay, ayaa si qarsoodi ah loogu kaydiyey halkan. Aaggu wuxuu hoy u yahay Roswell Spacewalk iyo Matxafka Caalamiga ah ee UFO iyo Xarunta Cilmi -baarista oo ay weheliyaan Roswell Museum & Arts Center, dhammaantoodna waxaa ku qulqulay xamaasad -bannaan. Muujinta UFO dhab ah halkan ayaa laga yaabaa inay adag tahay, laakiin u gudub magaalada si loogu qabto Roswell UFO Festival oo la qabto Afartii Luulyo dhammaadka toddobaad kasta si loogu dabaaldego wax kasta oo ka baxsan dibadda taageerayaasha kale. Kumanaan ku labisan dharka ayaa u kulma halkan Comic-Con ee dadka u adeega UFO, oo ay ku jiraan muxaadarooyin iyo dhoolatus shisheeye.
Beerta Qaranka ee Joshua Tree, California
Joshua Tree oo ku yaal 29 Palms Highway waxaa loo yaqaanaa inuu leeyahay marin biyoodyo badan oo dhulka hoostiisa ah oo ay ku badan yihiin macdanta iyada oo aan jirin sabab la sharrixi karo. Beerta Qaranku waxay mar hoy u ahayd 300 oo miino oo ku yaal lama -degaankeeda ballaaran, oo ay ku jiraan buur quartz cad oo gaar ah oo ka dambaysa Giant Rock. Waxaa la rumeysan yahay inay tahay saldhig shisheeye cilmi -baarayaasha qaarkood. Kuwa raacsan UFO ee saxare ka baadhaya halkan waxay rumaysan yihiin in Joshua Tree uu ku fadhiyo Woqooyiga 33aad ee is barbar socda sida Roswell oo kale. Sidaa darteed, waxay noqon kartaa a hotspot u ah aragtida UFO. Sannado badan, cilmi -baarayaashii UFO waxay halkan isugu yimaadeen toddobaadyo dheer oo muxaadarooyin iyo aqoon -isweydaarsiyo ku saabsan aan la sharraxin. Waxaa loo tixgeliyey Woodstock of UFOlogy, dhammaadka usbuuca waxay iftiiminayaan wax kasta oo aan laga sharraxin sayniska UFOs iyo shisheeyaha qadiimiga ah ee asalka aadanaha iyo shaacinta dowladda.
Telescope-ka Aperture Spherical Telescope (FAST) oo dhererkiisu yahay shan boqol oo mitir waa kan ugu weyn uguna xasaasisan raadiyaha. Telescope Radio FAST, oo ku yaal meel miyi ah oo ka tirsan gobolka Guizhou ee Shiinaha, ayaa iftiimiyay iftiinkii ugu horreeyay sannadkii 2016 -kii, cilmi -baarayaasha Shiinaha ayaa rumeysan inay tahay xulashada ugu wanaagsan ee bani -aadamku u leexiyo farriimaha meel bannaan. Naanaysta Tianyan, oo la macno ah "Eye of the Sky" ama "Eye of Heaven," oo ay aasaaseen, waxaa la ogaaday inay xallisay qaar ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu waaweyn caalamka. Mid ka mid ah hawlgallada asaasiga ah waa in la ogaado calaamadaha isgaarsiinta ee shisheeyaha. Booqo yaabkan weyn ee sayniska oo hel fursad aad ku daawato saynisyahannada oo ka shaqeynaya qaar ka mid ah mashaariicda dhabta ah ee dhulka la xiriira.
Wycliffe Waa hagaag, Australia
Wycliffe Wanaagsan oo ku yaal waddada Stuart Highway ee Waqooyiga Dhulka ee dalka waxaa loo yaqaanaa UFO caasimadda Australia. Aragtida UFO ee dadka maxalliga ahi halkan aad bay ugu badan yihiin in aaggu marti-geliyo isgoys dhammaystiran oo shisheeye ku leh Wycliffe Well Holiday Park. Waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya 5 ee meelaha shisheeyaha laga arko ee adduunka oo socotadu ku duuli karaan si ay u daawadaan UFOs oo soo fogeeya, badanaa inta lagu jiro bilowga xilliga qalalan min May ilaa Oktoobar. Warbixinnada waxyaalo duulaya oo aan la garanayn waxay bilaabeen inay ku soo kordhaan aaggan tan iyo maalmihii Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Booqdayaasha halkan imaanaya waxay soo qaadan karaan telescopes -kooda waxayna joogi karaan qolalka Wycliffe Well Holiday Park. Dadka deegaanku waxay ku andacoodaan inay arkaan walxo la yaab leh ku dhawaad ​​maalin kasta inta lagu jiro “Xilliga UFO”.
Magaalada San Clemente waxaa loo tixgeliyaa inay tahay caasimadda UFO ee aan rasmiga ahayn ee adduunka. Sida laga soo xigtay cilmi -baarayaasha ka shaqeeya halkan, aragtida UFO ayaa celcelis ahaan hal toddobaad kasta. Waxaa jira aragtiyo aad u badan oo Guddiga Dalxiiska ee Chile ay u sameeyeen raad-raac UFO oo dhererkeedu yahay 30 km sannadkii 2008. Raadku wuxuu ka qaadaa dadka socotada ah buuraha Andes ee dabiiciga ah oo daboolaya goobo kala duwan oo laga soo sheegay is-aragyo dhow. Aaggu wuxuu hoy u yahay harada Colbún oo leh macdan aad u sarreeya sida muuqata oo aan lahayn il (cod yaqaan?). Muuqaalka muuqda ee raad -raacku waa El Enladrillado, oo ah dhul ballaadhan oo aad u layaab leh oo ay sameeyeen 200 oo si qumman u gooyay foolkaanno la rumaysan yahay inay dhigeen ilbaxnimooyinkii hore. Fikradaha shirqoolka iyo cilmi -baarayaashu, si kastaba ha ahaatee, waxay rumeysan yihiin inay tahay barxad ay ku soo degaan kuwa ka baxsan.
JOHN DEEGAN wuxuu leeyahay,
Oktoobar 21, 2021 at 10: 38
Waxaan goob joog u ahaa saaxiibkiis UFO oo dul heehaabaya warshad kiimiko ah oo ku taal Manchester saacadu markay ahayd 5.50 subaxnimo hal subaxnimo bishii Luulyo 1999kii, waxaan ka shaqaynayey Traffor Park anigoo riixaya baabuurka markii aan maqlay dhawaqa dhirta kiimikada ee u dhow hooter degdeg ah , markii aan ka eegay wadada waxa dul heehaabaya farsamadan tuubooyinka kiimikaad, waxa si degdeg ah iigu soo biiray nin aan wada shaqayno oo isna baaskiil u wada shaqada. Waagaas aad bay u aamusnayd oo guuxa kaliya ee ka dhashay hooter-ka, ma jirin wax sawaxan ah oo ka dhashay farsamada gacanta, waxa aad mooddaa in ay hawada dhexda dhigeen oo ay bareega gacanta saareen. Adduunyadu may ahayn, waxay naga dhigtay labadeenaba daahitaankayagii 6-da aroornimo ee warshaddii aan wakhtigaas ku jilcsanayay, markaa waxaan noqday rumaystay in ay na soo booqdaan dad ka baxsan dhulalka, waxaan 1994 tagay hadal ku saabsan Suffolk UFO oo uu bixiyay Col. Charles Holt oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee saldhiga ciidamada Usa halkaas oo uu hore u daawaday dhawr barnaamij oo mawduuca ku saabsan. Waxa ay ahayd uun rumayste Masiixi ah in bishii Febraayo 2016 aan la kulmay xaqiiqda ah in Ciise iyo Maryan iyo qaar ka mid ah quduusiinta ay u muuqdeen Veronica aragtidii Bayside USA (1970-94) iyo waxyaabo kale oo ay u sheegeen waxa dhici doona. waayihii dambe ee aynu maanta joogno waxa ay ahayd Shaydaanka iyo kooxihiisii ​​oo ahaa kuwii farsamadan kala duwan ee dunida dacalladeeda ku duuli jiray si ay u khiyaameeyaan in ay ina soo booqdaan qoomiyado shisheeye oo aan jirin. Marka uu dhaco Rapture-ka Masiixiga oo aan aaminsanahay in ay ahaan doonto muddo tobankan sano ah warbaahinta wararka ayaa u sheegi doonta kuwa ka tagay in afduub ballaaran uu dhacay si loo daboolo dhacdada rabbaaniga ah (warar badan oo been abuur ah), tani waxay soo bandhigi doontaa 7 sano. Muddada fitnada yacni, marka Ciise sii daayo 4-ta fardooleyda ah, waxaa dagaalka billaabi doona ciidamada isku dhafka ah ee Ruushka/Shiinaha & New York oo uu ku dhacay majaajiliiste, wixii ka soo kordha arrintan kala soco mareegaha xaramka. http://www.tldm.org oo hoos ka eeg tilmaamaha mawduuca. Muqaalkooda Bayside waxaa lagu xaqiijiyay mucjisooyin badan oo halkaas lagu sameeyay, inkastoo kaniisaddu aysan weligeed si rasmi ah u aqoonsan doonin, waxay sheegeen in Shaydaanku kaniisadda galay hadda heerkii ugu sarreeyay oo qayb ka ah dagaalka ruuxiga ah ee socda, baadarigii ugu dambeeyay ee saxda ahaa wuxuu ahaa. Benedict.
Markii bandhigga UFO & Miyirku yimid Manchester 2017 wuxuu ka dhacay waddada hareeraheeda oo aan goob joog u ahaa UFO 1999, marka la eego safarka iimaankayga ma rumaysni in tani ay ku dhacday. Waxay kor u qaadaan fikradda bandhigga in ay nagu soo booqdaan jinsiyadaha shisheeye iyo qaar ka mid ah fikradaha shirqoolka ah ee ku xeeran arrintan. Waxa jira oo jiray dhokumentiyo badan oo tv-ga ku saabsan mawduucan kuwaas oo sidoo kale dhiirigeliya fikradan.
Waxaan haystay warqad lagu daabacay saxaafadda cilmaaniga ah ee maxalliga ah mawduuca 2018 ee Iiddii Maskaxda ee Maryan barakeysan.
Markaa taasi sirtayda ayaa lagu macneeyay, Shaydaanka iyo kooxdiisu waa makhluuqa ka sarraysa, waana sababta uu Baybalku inoogu sheegayo inaynaan ka soo horjeedin jidh iyo dhiig keliya, balse ka soo horjeedan awoodo iyo maamullada. Taasi waa sababta uu Masiixu u haysto salaadda / soonka iwm qolka hubka ruuxiga ah, taas oo waxtar u leh hawlihiisa.